Maajo 19, 2018 7:02 g 1
CAAWA & DALJIR 1012 Wararka 17218
Axmed Cali Salaad: “Qadar anaa wata adna Imaaraadka ha raacin wax la qaadan karo ma aha!”
Abwaan Ilyaas 2 years
Waxaa fajiciso igu noqday oo an jawaab waafiya karabaa Madaxweyne Farmaajo inuu ummaddiisa usheego, sababta ay dawladda federaalka wasaaradeheeda Xamar ku yaalla looga furiwaayey magaala madaxyada kale ee dawlad gobaleedyada Soomaaliya?!!
Raisul wasaare Khayre waa ka hurdaa ammuurtaas ama aqoonba uma leh baahida ummadu uqabto faafinta xafiisyada faderaalka. Waa nasiib darro in faderaalkii ummadu intaasoo sano ay sugaysay laga soo bilaabo xilligii la doortay Abdullahi Yusuf ilaa maantay oo Farmaajo madaxweyne yahay an ummadu arag wali xafiis faderalka mathala oo ka furan meel Mogadishu ka baxsan. Madaxdeena Faderaalku waxay wali u dhaqmayaan sidii inay xukumaan dawlad an Faderaal ahayn ee ah “central government” sidii dawladihii hore ee soomaray Somaaliya.